Ihe Ngwongwo Na-ekpo Ọkụ nke Infrared maka oche oche China Manufacturer
Nkọwa:Ihe ndị dị ọkụ maka oche oche,Ebe obibi oche oche,Ihe na-ekpo ọkụ oche oche
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Ihe Ngwongwo Na-ekpo Ọkụ nke Infrared maka oche oche
Igwe ihe nkiri a kpochapụrụ nke ọma a bụ ihe eji eme ihe ọ bụla maka oche ụlọ mposi . A na-eji ya n'ụlọ, ọfịs, ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, wdg.
Kedu ihe nkiri kpo oku nke dị ọkụ?
Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nke a maara dị ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ, bụ ihe ọkụkụ dị iche iche na-ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ mmepe. Ọ na-ebute ebe dị elu, na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na-eji redio infrared. Ọ na-adịgide adịgide ma na-eji ike karịa ike karịa usoro ikpo ọkụ omenala. Site n'ichekwa ọnụego ọkụ na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike iwe ọkụ na nkeji ole na ole. Mmiri na-egbuke egbuke, nke a maara dị ka anyanwụ na-egbuke egbuke nwere ike ịgbasa arịa ọbara, na-egbochi ahụrụ mgbu, mee ka mbelata nke ahụ mmadụ dịkwuo elu ma melite mmetụta nke usoro mgbasa ozi. Ọzọkwa, ngwaahịa anyị enwetaworị nkwado nke asambodo CE, RoHS, Ul, ETL. A na-emesi onodu mma.
Ee. 5. Ngwaahịa anyị enweela nkwenye nke CE, RoHS, Ul, ETL, wdg.
Mba 6. Anyị dị 100% njikere ma na-amasị na-eto eto na onye ọ bụla ahịa ọnụ.
7. Tupu etia ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị ịkwado nguzogide kwesịrị idekọ na ọnọdụ kwekọrọ
8. Ọ dị mkpa ka ịmepụta akwụkwọ obibi akwụkwọ , ihe ọmụma dị ka nọmba ụda, na ụbọchị mmepụta
Onyinye onyinye Krismas kachasị mma maka ahịa Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ndị dị ọkụ maka oche oche Ebe obibi oche oche Ihe na-ekpo ọkụ oche oche Ihe na-ekpo ọkụ maka oche oche Ihe ndị dị ọkụ Ihe dị na tebụl dị ọkụ maka Office Egwuregwu na-ekpo ọkụ maka oche oche Akụkụ dị ọkụ maka iko